Itoobiya oo siyaasi caan ah iyo xubno kale ku oogtay dambiyo agagixisonimo | Somalia News
Shakhsiyaad magac leh oo mucaarad ah ayaa ka mid ah 24 qof oo ay Itoobiya ku soo oogtay dacwad ah argagixisonimo.
Eedahaas ayaa waxay la xidhiidhaan qalalaase isir ku salaysnaa oo dhawaan ka dhacay dalkaas ka dib markii la dilay heesaa caan ah oo Oromo ahaa, Hachalu Hundessa, waxaana ku dhintay rabshadahaas dhacay dabayaaqadii bishii Juune 150 qof.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa sheegay in dadkaa maxkamad la horgeyn doono maalinta Isniinta.
Dadka dhaliila Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed ayaa ku eedeeyey in uu xidhxidhayo dadka mucaarida xukuumaddiisa.
Jawaar Maxamed oo ah nin awood badan ku leh warbaahinta hase yeeshee markii dambe noqday siyaasi mucaarad ah oo ay dad badani taageeraan una badan dhalinyarada Oromoda, ayaa ka mid ah dadkaa dacwadda lagu soo oogayo.
Waxa la xidhay bishii Juulaay markii ay ciidamada nabadgelyadu qabqabashada bilaabeen. Qareenkiiisa ayaa se Sabtidii ganafka ku dhuftay dacwaddaa lagu oo oogay waxaanu ku tilmaamay mid aan sal lahayn.
Jawaar oo ay hore jaal u ahaayeen Abiy ayaa ku dhaliilay ninkaa ku guulaystay abaal marinta Nobel ee nabaddda in aanu wax la taaban karo ka qaban tabashooyinkii mudada dheer soo jiitamayey ee ay qabaan dadka Oromadu, oo ah qoomiyadda ay labadooduba ka dhasheen.
Maqaal uu ku qoray cadadadkii todobaadkan ee wargeyska Economist ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, ayaa Abiy wuxuu ku sheegay in dadka ka soo horjeeda isbedelka uu wadaa ay doonayaan in ay abuuraan nacayb ay ku kala qaybiyaan dadka oo ku salaysan isir iyo diin.
Dad badan oo dhaliila, oo qaarkood aanay dalka ba joogin, ayaa sidoo kale magacyadooda lagu daray dadka eedaysanayaasha ah.
Sida lagu sheegay warbxin uu xeer ilaaliyaha guud ee dalku ku baahiyey bogagga baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka, waxa kale oo eedaysanayaashaa lagu soo oogi doonaa dacwado ay ka mid yihiin ku xad gudub sharciyada isgaadhsiinta iyo haysasho hub sharci darro ah.
Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku dhaleeceeyey dawladda in ay todobaadyo ku qaadatay in ay dadkaa dacwado ku soo oogaan maxkamad lagu soo taago.
Ugu yaraan 166 qof ayaa dhintay bishii Juun maalmihii ay socdeen shaqaaqooyinkii ka kacay dilkii Hachalu oo 34 jir ahaa.
Ninkaas oo ahaa aabe laba caruur ah dhalay, ayaa gobolka Oromiya ka ahaa halyey. Heesihiisuna waxay ka hadli jireen xuquuqda dadka Oromada ah ee dalka oo ah qoomiyadda ugu badan dalka Itoobiya, waxaanay sidoo kale u noqdeen hal ku dhegyo mudaharaadadii daafadda lahaa ee horseeday inuu dhaco ra’isal wasaarihii hore 2018.
Sababta dilkiisa ilaa haatan lama oga, hase yeeshee dhawr goor ayuu Hachalu sheegay in ay soo gaadheen fariimo dil loogu hanjabayey.
Previous articleUS says all UN sanctions on Iran restored, but world yawns
Next articleCiidamada Amniga Jubbaland oo Howlgallo Ka Sameeyey Magaalada Kismaayo